Fironana vaovao Purificación García amin'ny fahavaratra | Bezzia
Fironana vaovao avy amin'ny Purificación García ho an'ny fahavaratra
Maria vazquez | 29/04/2021 18:00 | Inona no hotafiko
Teo afovoan'ny ririnina dia nahita topy maso kely momba ny ankehitriny isika fanangonana Purificación García. Fanangonana SS21 tena lehibe dia lehibe izay ahitantsika ireo fironana vaovao telo an'ny orinasa. Azonao atao ve ny maminavina hoe avy aiza amin'ireo sary fonony ireo?
Fantatrao angamba izy ireo. Ny voalohany dia manana loko ho mpiorina ao aminy; manokana, loko volomboasary lalina. Ny sisa tavela dia manondro karazana pirinty roa: ny pirinty misy tsipika sy ny pirinty botanika na voninkazo. Fironana telo izay, na izany aza, tsy izy irery no ao amin'ny fanangonana vaovao an'ny orinasa Espaniola.
1 Ny Orange
2 Ny dian-kapoka
3 Fanontana voninkazo
Mahagaga ny mahita ny voasary milalao an-tsary ao amin'ny fanangonana Purificación García. Hitantsika izany ao amin'ny sombina misy pirinty kanto toy ny akanjo midi pleated tsy misy tanany sy ilay lobaka lava mikoriana miaraka am-pofoana, paosy lehibe fanampiny ary tady amin'ny sisiny. Fa koa amin'ny akanjo tsotra toy ny palitao tsy voarafitra miaraka amin'ny tsipika somary matevina miaraka amin'ny sisiny na ny palitao vita amin'ny hoditra faux. Akanjo izay tsy mihambahamba ny orinasa mitambatra amin'ny fotsy hafa.
Tsipika mitsivalana sy mitsivalana, dian-kapoka manify sy matevina ... Karazan-tsipika samihafa no misongadina eo amin'ireo zava-baovao atolotry ny Purificación García. Na izany aza, mizara toetra iray iraisana ny rehetra, Aseho amin'ny mainty sy fotsy izy ireo. Amin'ity pirinty ity dia ahitanao akanjo mirehitra, pataloha mahitsy ary palitao roa-tratra ao anaty landy vita amin'ny tantely misy volo. Na dia mety aza, dia ny zipo midi mirehitra sy ny palitao landihazo misy tsipika mitsivalana izay hisarika ny sainao indrindra.
Ny voalohany botanika, mamiratra ary maro loko. Ny voninkazo faharoa amin'ny loko mainty sy fotsy misy loko mavo. Efa manana ny tianao ve ianao? Ny palitao nanapaka trench palitao amin'ny nilona totohondry misy vozona boribory ary ny akanjo midi amin'ny crepe grained miaraka amin'ny tanany fohy mifangaro sy ny zipo vita amin'ny balaonina no sanganay ankafizinay misy pirinty botanika.
Anisan'ireo miaraka amin'ny pirinty voninkazo mainty sy fotsy Tena mahavoa antsika ny akanjo fohy mahitsy sy ny pataloha, samy ao anaty crepe misy antsipiriany momba ny fantsom-pitaterana. Na dia tsy te-hijanona tsy hanonona ny palitao baomba aza isika satria mety ho lasa mpiara-miasa lehibe hamita fitafiana tena samy hafa amin'ny fahavaratra.
Tianao ve ny tolo-kevitr'i Purificación García amin'ny fahavaratra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Fironana vaovao avy amin'ny Purificación García ho an'ny fahavaratra
Sarontava volo 6 ho an'ity lohataona ity
Ahoana ny fanesorana ny warts